Fianarana milina: inona izany ary inona no ampiasaina amin'ny Android | Androidsis
Inona no atao hoe Learning Machine ary inona no ilana azy?
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia iray amin'ireo mpihetsiketsika lehibe ankehitriny amin'ny Android. Mihamaro hatrany ny mpanodina manomboka mampiasa motera neural na coprocessor izay mizara loharano ho an'ny asan'ny AI. Zavatra iray izay hitanay tao amin'ny sasany amin'ireo fikirakirana avo lenta izay nahavoa ny tsena tato ho ato, toa ny Exynos 9820 o Kirin 980. Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mahita teny iray hafa isika dia ny Machine Learning.
Mahazatra mihaino an-tanana ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny Machine Learning isika. Na dia maro aza ireo mpampiasa amin'ny Android no tsy tena mahalala hoe inona izany na inona izy ireo. Manaraka izany dia holazainay aminao bebe kokoa momba izany, mba hahafahanao mazava momba ireo foto-kevitra ireo, ny fahita any ankehitriny.
Ny tena izy dia hevitra roa samy hafa izy ireo, araka ny azonao an-tsaina, na dia mifandray akaiky aza izy ireo. Misy ihany koa ny teny iray hafa izay manomboka mahazo be dia be eo amin'ny tsena, toy ny Deep Learning. Ireto ambany ireto dia holazainay aminao bebe kokoa momba ireo hevitra ireo, mba hahafantaranao izay asehon'izy ireo tsirairay.
1 Zava-tsarobidin'ny kintana
3 Inona no ampiasaina amin'ny intelligence Android?
Azontsika atao ny manondro ireo asa izay mitaky matetika na mila mitaky ny faharanitan-tsaina olombelona. Ny foto-kevitry ny faharanitan-tsaina artifisialy dia nipoitra tamin'ny taona 60, teo amin'ny tontolon'ny informatika. Tamin'izany fotoana izany, ity teny ity dia noforonina hamahana ireo asa azon'ny olombelona atao amin'ny fomba tena tsotra, saingy mametraka fanamby ho an'ny solosaina izany. Io no niandohany.
Ao anatin'ny faharanitan-tsaina artifisialy no ahitantsika asa manokana. Anisan'izany no ahitantsika ny sasany hahafantatra zavatra, zavatra hitantsika rehefa mampiasa fakan-tsary amin'ny telefaona miaraka amin'i AI, izay azon'ilay masinina atao mifandray amintsika am-bava, toy ny mpanampy sns. Function izay hitantsika matetika hatrany hatrany.
Faharoa, hitantsika ny fianarana ny milina. Araka ny anarany, momba ny fianarana milina io. Io dia ny ampahan'ny AI izay natokana hanome valiny na vahaolana amin'ny olana na fanontaniana napetraka. Amin'ity tranga ity dia homena ny valiny raha tsy efa voarindra ny rafitra. Hianatra samirery ny rafitra hanome ity valiny ity na hamaha ity olana ity.
Ity dia zavatra izay hahomby mifototra amin'ny zavatra niainanao taloha teo amin'ireo asa ireo. Azontsika atao ny mahita fa ny Mianatra Miorina dia mifototra amin'ny fototry ny fitondran-tenan'olombelona, ​​amin'ny fianarana avy amin'ny zavatra niainana. Ankoatry ny fanomezana fanentanana tsara sy ratsy, amin'ny endrika sazy na valisoa.
Ny fitondran-tenan'ny olombelona izay nomena dia mazàna miverimberina rehefa mandeha ny fotoana. Raha ireo fitondran-tena izay voasazy ireo dia mihena mandra-pahafatiny dia maty izy ireo. Ohatra iray tsara amin'ny fampiharana azy amin'ny telefaona dia ny manamarina fa io asa io dia tontosa tsara, tsy maintsy manindry bokotra iray na mametaka ny rantsantanana isika.
Ohatra, raha misy fanekena amin'ny tarehinao ny findainao Android, rehefa mampihetsika azy ary mahita fa mahafantatra antsika ny telefaona, dia tsy maintsy soloantsika ny rantsan-tanantsika. Famantarana fa nahavita ny asany tsara ny telefaona. Raha, etsy ankilany, hitantsika fa tsy nahafantatra antsika ilay fitaovana, dia mila ampidiro ny fanalahidy mamoha mitovy amin'izany. Amin'ity tranga ity dia midika fa tsy vita tsara izy io, ka amin'ny manaraka dia tsy tokony hahomby ianao amin'izany.
Inona no ampiasaina amin'ny intelligence Android?
Mahazatra hatrany ny mahita faharanitan-tsaina artifisialy, ary noho izany amin'ny Learning Machine amin'ny telefaona Android. Nanjary mahazatra eo amin'ny tsenan'ny telefaona. Ary tsy zavatra tokony hahagaga antsika izany, satria manolotra andiana fiasa izay mahatonga azy io ho zava-dehibe tokoa.
Fanekena ny feo
Famantarana ny tarehy amin'ny ankapobeny sy ny famantarana ny fomba fiteny
Fandikana fiteny mandeha ho azy
Fanatsarana fakan-tsary (asa fanampiny toy ny fahafantarana zavatra)
Soso-kevitra momba ny atiny mifototra amin'ny tsiro na ny tantaranao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Inona no atao hoe Learning Machine ary inona no ilana azy?
Sehatra, fizika zavatra ary jiro neon ao amin'ny Spectrum Break
Tsikaritr'i Frantsa ny telefaona 8 namoaka taratra mahery vaika